Inona no andraikitry ny backlinks amin'ny raharaham-barotra?
Ny fametrahana ny raharaham-barotra an-tserasera dia hevitra tsara foana satria eto dia afaka manintona mpanjifa be dia be ianao, mamorona fampiroboroboana fampiroboroboana ary mahatonga ny marika fantatrao amin'ny orinasanao. Na izany aza, raha te hahita ny tanjon'ny fandraharahana ianao, dia mila manana fanentanana fanaraha-maso mendrika ianao. Azonao atao ny manangana ny tranonkala fitsangatsanganana na mamotika ny ezaka rehetra SEO anao. Izany no antony tokony hahalalanao tanteraka ny lafiny rehetra fanatsarana sy hahatonga ny fahaizanao ho velona. Raha toa ianao ka vaovao ao amin'ity sehatra ity, tsara kokoa ny manondro ireo manampahaizana manokana. Na izany aza, mila mila mitandrina tsara koa ianao amin'ny fisafidianana sampan-draharaha na mpanolo-tsaina mifanentana satria betsaka ireo charlatans no mihevitra ny ho manam-pahaizana.
Ny sehatry ny fivarotana dia sehatra tsara indrindra hahatongavana amin'ny pejy SERP voalohany ilainao hampiasa vola be, vola ary ezaka. Izany no antony, manoro anao aho mba hanam-paharetana sy hiasa mafy. Ankoatra izany, hevitra tsara ny mamela mpampiasa rohy matihanina mamorona lahatsary lafatra tsara ho an'ny tranonkalanao izay hahatonga ny orinasa hijanona ambony noho ireo mpifaninana aminao.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny teknikam-pampianarana sasany momba ny fomba hahazoana fiverenana an-dàlana mankany amin'ny tranokalanao ary hamoronana fanentanana mendrika hatao.
Ny fampielezan-kevitry ny fanorenana ny rohy dia tokony mifototra amin'ny fahafaha-misafidy
Tsy misy ny rohy tafiditra ao anatin'izany dia ahafahanao mivezivezy tsara amin'ny sehatry ny fikarohana raha tsy manana ny votoatiny manan-danja sy vatofokofoka. Maro ireo tranonkala ao amin'ny tranonkala izay manome mpamaky tsy manan-danja sy tsy manan-danja. Tsy manana fahafahana hizara ity votoatin'ny fako ity ny mpampiasa ary mitady fikarohana fa tsy misy dikany sy tsy misy vidiny. Rehefa miha-maro kokoa i Google, dia mora ny manavaka ny mahaliana sy tsy misy ifandraisany amin'ny votoatin'ny tranonkala mifandraika. Izany no mahatonga azy ho manan-danja kokoa amin'ny famoronana loharanom-baovao izay misy votoatiny manan-danja sy mendrika izay manana lanja lehibe ho an'ny mpamaky.
Ankoatr'izay dia mila manao antoka ianao fa mifanaraka amin'ny lohahevitr'ireo orinasa ny lahatsorinao. Tokony hanome fampisehoana mazava izay mety ho hitan'ny mpampiasa manaraka rohy. Mila misoroka ny famoronana endritsoratra manan-danja ianao mba hisarihana ny mpampiasa amin'ny loharano na dokam-barotrao. Ny tsy misy ifandraisany amin'ireo lahatsoratry ny lahatsoratra fanongan-doha dia mahatonga ny mpampiasa ho kivy, ary izy ireo dia mitodika amin'ny loharanom-baovao iray hafa manan-danja kokoa ao amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana.
Mampiasa tranonkala fananganana rindranasa mba hamoronana fanentanana fananganana rindran-kira
Backlinks dia rohy izay manondro ny toerana misy anao avy amin'ny loharanom-baovao hafa. Izy ireo dia tena ilaina amin'ny fijerena tranonkala satria izy ireo dia tsy mamorona lozam-pifamoivoizana foana ao amin'ny tranokalanao, fa manatsara ihany koa ny toerana misy anao ao amin'ny Google SERP. Na izany aza, tsy mora ny manangana rohy raha tsy manana traikefa amin'ity sehatra ity ianao. Soa ihany, afaka mahita tranonkala fifaneraserana amin'ny serivisy ianao amin'ny tranonkala. Ny tolotra matihanina tsara indrindra ao amin'ny tranonkala dia Moz, Semalt Auto SEO, ary Ahrefs.
Ny orinasanay dia manokana ny fifandraisan-tanana amin'ny fananganana rohy ary mamaritra ny fampiasana paikady matanjaka matanjaka. Miara-miasa amin'ny loharanom-baovao efa maherin'ny 50 000 izahay any amin'ny tsena sy indostria tsena. Izany no ahafahantsika manome ny mpanjifantsika amin'ny rindran-damina maharitra maharitra sy maharitra. Ny vokatra azo tsapain-tanana avy amin'ny Semalt mpanjifa dia mampiseho fa hevitra tsara ny manana farafaharatsiny amin'ny ampahany amin'ny ezaka SEO izay arahin'ny mpitsabo SEO za-draharaha. Ny fiaraha-miasa Google amin'ny serivisy nomerika matihanina dia mety hahomby kokoa noho ny tsy, manome tolotra tranokala mahery vaika izay hahazoana antoka ny fahombiazan'ny fanentanana fanentanana anao Source .